भारतबाट आएका सबैको स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र लकडाउनको विकल्प सोच्न सकिन्छ: मुख्यमन्त्री शाही
विश्लेषण : अन्तर्वार्ता
उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने कर्णाली सरकारको तयारी, वडा-वडामा श्रम कार्यदल
बैशाख ७, २०७७
लोकान्तर संवाददाता थापा कर्णाली प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीवासीलाई घरबाहिर नजान र जनप्रतिनिधि र भीआईपीलाई गाउँ नजान निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
आइतवार बिहान कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै कर्णालीमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने उपायमा कडाइ गरिएको बताए । अहिले मन्त्री तथा अन्य जनप्रतिनिधि, भीआईपीहरू जिल्ला जाने गरेको बताउँदै उनले यस्तो नगर्न सबैलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
लोकान्तरका प्रदेश प्रतिनिधि शेरबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री शाहीसँग कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार कत्तिको गम्भीर छ भनेर सोधेका थिए । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
'मन्त्रीको काम व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो, आफैं गाउँ डुल्ने होइन'
मन्त्रीको काम समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो । कहाँ चामल अभाव छ, कहाँ अन्य कुरा अभाव छ त्यसको समाधान गर्ने काम हो । व्यवस्थापन गर्ने काम हो । मन्त्री आफैं गाउँमा पुग्न जरुरी नै छैन । कोरोनाले यो मन्त्रीको गाडी वा यो फलानो जनप्रतिनिधिको भनेर भन्दैन ।
लकडाउनको पालनमा हामी आफैंबाट शुरू गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु । त्यही कारण यो निर्देशन दिइएको हो । अहिले राजनीति भन्दा पनि स्वास्थ्य जोगाउनु नै ठूलो कुरा हो । वडा अध्यक्ष वा अन्य प्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरूलाई नै जिम्मा दिएको खण्डमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।
यहाँबाट मन्त्री वा मुख्यमन्त्री वडामा गएर कोरोना संक्रमण रोकिदैन । अहिले भारतबाट आएका, उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबै नागरिकहरूको जाँच गर्न आवश्यक छ । हामी सबैलाई जाँच गर्छौं । त्यो तयारीमा हामी लागेका छौं । एक घरदेखि अर्को घर जान बन्द गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौं । एक टोलदेखि अर्को टोल जान नदिने निर्णय भएको छ ।
यस्तो गर्नुको एउटै कारण कुनै घरमा कोरोना देखिएको खण्डमा अर्को घरमा सजिलै नफैलियोस्, उनीहरूको त्यही घरभित्रै उपचार गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । यसले सजिलो पनि हुन्छ । बिरामीलाई अस्पताल ल्याउन भन्दा जो जहाँ छ त्यहीं उपचार गर्नेगरी हामीले तयारी शुरू गरेका छौं ।
'सञ्चारकर्मीलाई पनि कडाइ'
अहिले सकेसम्म घरमै बसेर समाचार लेख्नुहोस्, भीडभाड बढाउन वा एक तस्वीर खिच्नकै लागि ज्यान जोखिममा राख्न आवश्यक छैन । तस्विरको गुणस्तर भन्दा ठूलो स्वास्थ्य हो । एकजना सञ्चारकर्मीमा कोरोना देखियो भने अन्यमा धेरै छिटो संक्रमण देखिने खतरा छ । सञ्चारकर्मीको धेरैसँग सम्पर्क हुने हुँदा सञ्चारकर्मीलाई अत्यावश्यक वा नगई नहुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दछु ।
हामीले लकडाउनलाई कडाइ गर्न केही बल प्रयोग गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ । मानव जोगिए मात्रै मानवअधिकारको कुरा हो । मानव नै नरहे के को अधिकार ? अहिले जसरी पनि लकडाउन कडाइका साथ पालना गरौं र गराऔं । भारतबाट आएका सबै नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरिसकेपछि लकडाउनको विकल्प सोच्न सकिन्छ ।
यहाँ नाकाभन्दा जंगलको बाटो हिंडेर धेरै नागरिक आएका छन् ।
संघीय सरकारले पछ्याउँदै प्रदेशका निर्णय
हामीले पहिले नै निर्णय गरेका कुराहरू संघीय सरकारले पछ्याइरहेको छ । शुरूमा हामीले नै (भारतमा संक्रमण देखिनुपूर्व) हेल्थ जाँच गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोनासम्बन्धि तालिम दिने काम गरेका थियौं । हामी प्रदेशलाई लकडाउन गर्छौं भनेर भनेको दुई दिनभित्र संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको हो । यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र सुरक्षाकर्मीलाई शुरू तलब स्केलको पचास प्रतिशत भत्ता दिने हामीले निर्णय गरेका थियौं । संघीय सरकार धेरैपछि हामीले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढेको छ ।
हामीले सबैभन्दा बढि प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मीको जीवन रक्षामा दिएका छौं । उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्न सकेको खण्डमा मात्रै अन्य नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा हुने भएका कारण हामीहरू यसमा लागिरहेका छौं ।
संघीय सरकारले निर्माण गरेको कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रदेश सरकारको खासै भूमिका नै छैन । यद्यपी प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने, राहत वितरण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक बजेट दिने काम गर्दै आइरहेको छ । कार्यविधिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा काम गर्ने उल्लेख भएपनि कर्णालीका नागरिकलाई कोरोनाबाट जोगाउन हरसम्भव प्रयासमा सरकार नै लागिरहेको छ ।
यो वर्षको बजेट स्वास्थ्यमा लगानी
हामीले अहिले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले मागेजति बजेट दिएका छौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक करोड माग गरेको थियो, दियौं । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामूदायिक अस्पतालले पचास लाख मागेको थियो त्यो दियौं । यसका अलावा हरेक जिल्ला अस्पताललाई कम्तिमा २५ लाखदेखि बढीमा पचास लाख रुपैयाँ दिएका छौं । यो पैसा आइसोलेसन बेड बनाउन, साधारण बेडहरू निर्माण गर्न, भेन्टिलेटर राख्नका लागि, स्वास्थ्यकर्मीकालागि आवश्यक पर्ने सामग्री औषधि खरिदका लागि हो ।
उहाँहरूले हिसाब राख्ने, आफूलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्न सजिलो हुने र प्रदेश सरकारले भविष्यमा आवश्यक छानविन गर्न सहज हुने भएका कारण स्वास्थ्य संस्थामा बजेट पठाएका हौं । जे चाहिन्छ त्यो खरिद गर्न भनेका छौं । कोरोनाविरुद्ध लड्न आवश्यक पर्ने सबै हतियार खरिद गर्न र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न यस्तो गरिरहेका हौं ।
सर्वदलीय बैठक बोलाएर हरेक वडामा पाँचदेखि सात सदस्यीय स्वयंसेवक टोलीको गठन गरी नाम पठाउन आग्रह गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा बढीमा ८ सय जनाको अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न सकिने अवस्था छ । यो वर्षको बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउन खर्च गर्नेछौं । बाटाघाटा बनाउन अर्को वर्ष बजेट खर्च गर्नेछौं । स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन यो वर्ष पुरै ध्यान दिएर लागिरहेका छौं । अहिले बनाएका संरचना भविष्यमा पनि काम लाग्ने भएका कारण गरिएको लगानी खेर जाँदैन । आगामी वर्ष अन्य संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।
वडा वडामा श्रम कार्यदल,सबैको बैंक खाता
भारतबाट वा विदेशबाट आएका बेरोजगार युवाहरूको हरेक वडामा श्रम कार्यदल गठन गर्ने योजना बनेको छ । त्यहाँ रहेका सबै युवाको बैंक खाता सरकारले नै खोल्ने र खातामा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउने छ । बजेट सबै वडा केन्द्रित बनाउने छौं ।
त्यो पनि सबैभन्दा बढी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नेछौं । रणनीतिक योजना वा गत वर्षको आर्थिक दायित्व बोकेको योजनाबाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनेछैन । हरेक युवाको योजना हेरेर सहुलियत ऋण दिने योजना अनुसार हामीले ऐन बनाउँदैछौं ।
पहिले नै कमजोर रहेको र कोरोनाका कारण थप कमजोर भएको कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नेछौं । उनीहरूलाई उत्पादन गरिएका सबै कुरामा ढुवानीमा 'सब्सिडि' दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौं । यसले गर्दा नीजि क्षेत्रले कर्णालीमा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसले गर्दा स्थानीयले रोजगारी पाउने मैले अपेक्षा गरेको छु ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी पत्याउन थाल्यो भने मान्छे एकछिनल...
त्यस्ता केपी ओली यस्ता कसरी भए ? : बद्री पंगेनी [अन्...
प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुने वातावरण बनेको...
प्रचण्ड र माधव नेपाल गल्ती स्वीकारेर आए अझै पनि पार्...
प्रचण्ड र माधव नेपाल गल्ती स्वीकारेर आए अझै पनि पार्टी विभाजन रोकिन्छ– महासेठ [अन्तर्वार्ता]
पुस २०, २०७७
प्रतिनिधि सभा विघटनको रहस्य : ओलीको सनक अनि प्रचण्ड–माधवको निरीहता !
भारतको प्रस्ताव : सीमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाऔं
भीमले कसरी पाए हजार हात्तीको बल ? महाभारतको रोचक कथा
यस्तो छ गरीबी हटाउन श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई दिएको उपाय
यी हुन् संसारका खतरनाक गन्तव्य, विचार गरेर जानुस्
दैनिक एउटा अमला खानुस्, मुटुको समस्याबाट जोगिनुस्
कालो दाग भएको केरा खानुको फाइदा
सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला सबैले मान्नुपर्छ- राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिनुहुन्न भन्ने प्रावधान सम्झीसम्झी राखिएको हो’
विनोदको शतकको मद्दतमा आर्मी विजयी